Madaxweyne Trump iyo Hoggaamiyaha Kuuriyada Waqoyi oo kulmay
June 30, 2019 F.G 0
Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump iyo hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa ku kulmay soohdinta sida wayn uga caaggan hubka ee u dhexaysa Kuuriyada Waqooyi iyo tan Koonfureed halkaas oo ay si diirran isugu gacan qaadeen. Mr Trump ayaa noqday madaxweynihii ugu horreeyey ee xil haya ee cagta dhiga Kuuriya Waqooyi kaddib markii uu Kim kula kulmay soohdinta hubka ka caaggan ee u dhexaysa labada Kuuriya. Kulankan aan horay loo sii qorshayn ee ka dhacaya soohdinta hubka ka caaggan ayaa imaanaya kaddib markii Mr Trump uu bartiisa twitter-ka ku sheegay in uu halkaas ku marti qaaday Mr Kim. Madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in is gacan qaad kaasi uu “nabad” horseedi doono. Kulankan ayaa noqonaya kii saddexaad ee sanad gudihiis dhex maraya Mr Trump iyo Mr Kim, kulankii ugu horreeyey ee ay yeeshaan oo bishii February ka dhacay dalka Vietnam ayaa fashil ku dhammaaday. Mar ay ka falcelinaysay dalabkii Trump ee Sabtidii, ayaa Kuuriyada Waqooyi waxay sheegtay in dalabkaasi yahay mid aad u xiiso badan. Booqashada ayaa waxaa Mr Trump ku weheliya madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed [Sii aqri]
Wasirka Gashandhiga Iyo Wafdi uu Hogaaminayo oo Gaaray degaanka Bariire
Wafdi ka socda Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa manta gaaray deegaanka Bariire ee Gobolka Shabeellaha hoose si ay ugu kuur galaan xaalada deegaanka iyo baahiyaha ka jira oo ay ka mid tahay dhismaha buundada marta bartamaha Bariire. Wafdiga ayaa waxaa hogaaminayay Wasiirka Gaashaandhiga Soomaaliya Xasan Cali Maxamed (Amar-dambe) waxaana qeyb ka ahaa wasiir ku- xigeenka Arrimaha Gudaha Soomaaliya,Wasiir ku-xigeenka Caafimaadka, Wasiirro dowladaha Xafiiska Ra’sal wasaaraha, Guddoomiyaha gobolka Sh/hoose iyo mas’uuliyiin kale. Wafdiga oo ugu horeyn kulan xog wareysi ah la qaatay saraakiisha ciidanka xoogga ee gacanta ku haya deegaanka kadib waxa ay kormeereen Buundada Bariire oo ay Al-Shabaab burburiyeen sanadkii 2017 si ay u qiimeeyaan Injineero la socday wafdiga. Taliyaha ciidanka dhulka ee Xoogga dalka Soomaaliyeed General Odawaa Yuusuf Raage ayaa wafiga ku soo dhaweeyay Bariire wuxuuna sheegay in deegaanka ay xasiliyaan ayna rajeynayaan in la gaarsiiyo dadka deegaanka adeegyadii ay u baahnaayeen oo ay ku jirto dhismaha buundada Bariire. Guddoomiyaha gobolka Sh/hoose Ibraahim Aadan Najax ayaa tilmaamay in dhismaha Buundada Bariire ay muhiim u tahay nolosha dadka deegaanka .
Duqa Degmada Garoowe oo ka horyimid bandhig Maanta lagu qabtay Magaladaas
Maanta Magalada Garoowe ee Xarunta gobolka Nugaal waxaa lagu qabtay munaasabad loogu magacax daray maalinta caalamiga ee Yogo Day,kaas oo inta badan laga xuso Gudaha dalka Hindiya,waxaana munaasabada ka qyb galay safii iinaakiya u fadhiya dalka Kenya. Hayeeshee waxaa kasoo horjeestay Munaasabadaas markii ugu horaysay oo ay ka qayb galeen Madaxwaynaha Puntland iyo Safiirka dalka India u fadhiya Soomaaliya duqa ddegmda Garoowe Axmed Siciid Muuse. Qoraal uu soo dhigay bariisa Facebook ayuu ku sheegay in dhaqankaan uu yahay mid lag soo minguuriyay wadamo shihseeye,isla markaana Soomaalida ay leedahay diin iyo dhaqan u gaar ah oo lagu yaqaano. Soomaalidu waxay leedahay dhaqan, ciyaaro iyo caadooyin suuban oo ciyaalka iyo cirooluhuba ku madadaalan karaan. Balse dhaqamadan cibaadooyinka duqoobey ee soogalootiga ah salka ku haya ma aha wax ku haboon in lasoo minguuriyo. Sidaa awgeed, shacab iyo dawladba waxaan ugu baaqayaa inaan diinteena iyo dhaqankeena wanaagsan ilaashanno ayuu yiri Duqa degmada Garoowe. Waa markii ugu horeysay oo munaabada noocaan oo kale ah lagu qabto Magalada Garoowe,waxaana aad manta uga fal celiyay oo looga hadal hayaa Baraha Bulshada,iyada oo [Sii aqri]
Madaxweynaha Galmudug Xaaf Oo gaaray Muqdisho lana kulmay Madaxweyne Farmaajo
Madaxweynaha maamulka Galmudug Mudane Axmed Ducaalle Geelle ” Xaaf” ayaa soo gaaray maanta caasimada dalka ee Muqdisho. Garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ayaa waxaa ku soo dhoweeyay Madaxweynaha Galmudug xubno ka tirsan labada gole ee dowladda Soomaaliya. Madaxweyne Xaaf ayaa si toos ah u tegey madaxtooyada qaranka isagoo kulan la yeeshay Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo lamana oga arrimihii ay ka wada hadleen. Booqashadan ayaa timid kadib markii khilaafkii ka dhexeeyay dowlada federalka iyo Maamulka Galmudug lagu soo xaliyay magaalada Cadaado oo uu booqasho ku tegey Ra’iisul Wasaare Kheyre. Madaxweyne Xaaf ayaa muddo badan hal sano ka badan aan imaan magaalada Muqdisho, waxaana jiray Khilaaf kala dhaxeeyay dowladda dhexe ee Soomaaliya, kaasoo ugu dambeyntii heshiis laga gaaray.
SAWIR.Madaxweyne Farmaajo Iyo Duqa Muqdisho oo Xariga ka jaray Wado laami ah oo Muqdisho
Madaxweynaha Dowlada federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa saakay xariga ka jaray wado laami ah oo isku xiraysa degmooyinka Shangaani iyo Cabdicasiis. Wadadadn Madaxweynaha xariga saakay ka jaray ayaa isku xiraysa Degmada Shangaani iyo Xeebta Liido oo katirsan degmada Cabdicasiis, waxaana wadadan dhisay Maamulka gobolka Banaadir. Madaxweyne Farmaajo ayaa xarig jarka Wadadan kadib ugu magac daray Gabyaaga Caanka ah Allaha u naxariistee Cabdulaahi Suldaan Tima Cadde oo dad badan ku xasuustaan gabayga Calan saarka ah ee ”Kana siib kana saar ”. Maamulka Gobolka Banaadir ayaa dib u dhis balaaran ku sameeyay laamiyo badan oo bur bursanaa, waxaana dhismahan laamiyadan cusub ka qeyb qaadanayaan bilicda caasimada Muqdisho.
Ciidamada Dowlada Federalka Oo Howlgallo Ka Sameeyay G/Sh/ Dhexe
Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya howlagllo ciidamada dowladda saacadihii la soo dhaafay ay ka sameeyeen degaano ka tirsan gobolka Shabeeha Dhexe. Howlgallada oo ahaa kuwa ballaaran ayaa waxa ay ciidamadu ka fuliyeen deegaano dhaca galbeedka degmada Balcad ee gobolka Shabeelaha Dhexe. Deegaanada ay tageen ciidamada ayaa waxaa ka mid ah Cadayga, Keysaney Doonka, Tixsiile iyo Buulo-caasi oo dhammaan ka tirsan gobolkaasi. Ilo deegaanka ah ayaa sheegay in ciidamada ay gacanta ku soo dhigeen tiro dad ah, kuwaas oo u badan dhalinyaro. Saraakiishu ma shaacin illaa iyo hadda u jeedada rasmiga ah ee ka dambeysay baaritaanadaasi. Balse inta badan Al Shabaab ayaa weeraro gaadma ah ka fuliya waddada dheer ee isku xirta degmooyinka Balcad iyo Jowhar ee gobolka Shabeelaha Dhexe
Markab Muhaajiriin Badbaadiyay Oo iskudayay inuu dajiyo doon uu booliska Talyaniga leeyahay
Wasiirka arrimaha gudaha ee waddanka Talyaaniga, Matteo Salvini, ayaa waxa uu ku eedeeyay kabtanka markab siday muhaajiriin la soo badbaadiyay inay iskudayaysay inay dajiso doon boolisku uu leeyahay. Carola Rackete ayaa lagu xiray dekedda Talyaaniga ee Lampedusa kaddib muran taagnaa muddo laba todobaad ah. Markabkeeda, Sea-Watch 3, ayaa waxaa laga mamnuucay inuu ku soo xirto dekedda, hasayeeshee ugu dambeyntii waxa uu ku soo xirtay dekedda habeenkii Jimcaha. Sabtidii, ayuu Mr Salvini waxa uu Ms Rackete ugu yeeray “haweeney Jarmaliyad caddaan ah, ooqani ah” taas oo soo “qaadday dagaal”. Waxa ay isku dayday inay xilli habeen ah dajiso dooni uu boolisku leeyahay oo ay askar saarnaayeen,” ayuu yiri. Waxay dhahaan ‘naf ayaannu badbaadinaynaa’, hasayeeshee waxa ay halis galiyeen bini’aadam howshoodii gudanaya, muuqaallada ayaa arrintaas muujinaya.” Mr Salvini ayaa intaasi ku daray: “Markab boqollaal tan ah ayaa waxa uu iskudayay inuu quusiyo doon ay askar saaran yihiin, kuwaas oo ay u suuragashay inay iyagoo badqaba goobta ka baxsadaan. Taasi waa dambi waana dagaal cad.” Ms Rackete ayey u badan tahay inay wajahdo 10 sanadood oo xarig ah [Sii aqri]
Maxkamadda Racfaanka Maamulka Puntland ayaa dil toogasho ah ku ridday saddex Nin oo loo heysto kufsiga iyo dilka Caasho Ilyaan Aadan oo billowgii sanadkan ay ku dileen Gaalkacyo. Maxkamadda Racfaanka ayaa waxaa ay xukunka dilka ku raacday Maxkamadda darajada 1aad ee Gobolka Nugaal oo dadkan dil horay ugu xukuntay. Qareennada difaacaya Saddexda wiil ayaa waxaa ay sidoo kale racfaan ka qaateen xukunka saaka iyaga oo markan aadaya Maxkamadda sare ee Puntland. Maxkamadda Gobolka Nugaal ayaa warqad lagu soo xirayo u jartay qareenkii difaacayay saddexda xukunsane oo isaga laftiisa lagu eedeeyay caay, iyo iska hor keenidda shacabka iyo Maamulka Puntland. Puntland ayaa kufisga iyo dilka Caasho Ilyaan Aadan oo 12 jir ahayd u xirtay 10 qof,waxaana baaritaan lagu sameeyay hidda sidayaashooda lagu helay saddex Nin kuwaas oo xabsi ku jira. Qoyska Caasho oo ka cabanayay Caddaalad darro ayaa isaga guuray Gaalkacyo waxaana ay u guureen dhinaca Ismaamulka Soomaalida ee Itoobiya.
Mamulada Koofur Galbeed iyo Galmudug oo ka wada hadlay dilalkii Gaalkacyo iyo Dhuusamareeb
Laba Guddi ee ka kala socda Xildhibaannada Golaha Shacabka iyo Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed ayaa Maanta kulan la qaatay Odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka Magaaladaasi. Odayaasha ayaa Labada guddi uga tacsiyeeyay Dadkii lagu laayay Magaalooyinka Gaalkacyo iyo Dhuusamareeb, iyagoo sheegay in ay diyaar u yihiin Beelihii ay ka dhasheen Dadkii la laayay ay kala fariistaan dhibaatadii dhacday. Odayaasha Gaalkacyo ayaa Guddiyada u sheegay in lagu raad joogo dambiilayaashii falkaas geystay, lana soo qaban doono falkii ay geysteen ciqaabtiisana ay marin doonaan. Sidoo kale waxa ay ballan qaadeen in dhibaatadii dhacday aysan dib dambe u soo laaban doonin, si nabad gelyo ahna loo wada noolaanaayo wixii hadda ka dambeeya. Guddiyo ka kala socda Xildhibaannada Golaha Shacabka Soomaaliya iyo Dowlad goboleedka Koofur galbeed ayaa Maalmihii la soo dhaafay Magaalada Gaalkacyo ka waday kulammo ay la yeelanayaan maamulka, Odayaasha, wax garadka iyo qeybaha kala duwan ee Bulshada halkaasi ku dhaqan.
Booliska Muqdisho oo qabtay Nin Haweeney ku dhex dilay Hotel uu degganaa
Ciidamada Booliska Soomaaliya ayaa sheegay in ay gacanta ku dhigeen Nin ku eedeysan in uu Haweeney kufsaday kaddibna ku dilay Hotel uu ka degganaa Magaalada Muqdisho. Taliye ku xigeenka Booliska Soomaaliya Zakiya Xuseen ayaa sheegtay in Ciidamada amaanka ay qabteen Bishaar C/Risaaq Maxamed oo falkan ku eedeysan. Bishaar ayaa lagu eedeeyay in uu kufsaday islamarkaana hotelka ku dhexdilay Suleeqa Yuusuf Axmed. Ninkan ayaa laga soo qabtay Hotel ku yaalla Xaafadda Baar Ubax ee Degmada Howlwadaag halkaas oo uu gabadha ku dilay. Zakiya Xuseen ayaa sheegtay in eedeysanaha uu hadda gacanta ugu jiro hay’adda dambi baarista ee Soomaaliya halkaasna baaritaan lagula sameynayo. Dilka Suleeqa ayaa hadal heyn badan ka dhex abuuray bulshada Muqdisho,waxaana Ciidamada amaanka ay hadda xaqiijiyeen in ay gacanta ku dhigeen eedeysanaha.